केपीको प्रतिगमनको मतियार शेरबहादुर भएकाले मैले नेपाली कांग्रेस छाडें : हंशराज वाग्ले, युवा नेता, नेका - Jhilko
बिहीबार, असोज ७, २०७८ / Thursday, September 23, 2021
गृहपृष्ठ ∕ बिचार ∕ केपीको प्रतिगमनको मतियार शेरबहादुर भएकाले मैले नेपाली कांग्रेस छाडें : हंशराज वाग्ले, युवा नेता, नेका
केपीको प्रतिगमनको मतियार शेरबहादुर भएकाले मैले नेपाली कांग्रेस छाडें : हंशराज वाग्ले, युवा नेता, नेका
झिल्को डटकम २०७७, पुस २५ गते १९:२२ मा प्रकाशित
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता हंशराज वाग्ले राजधानी काठमाडौंमा एक विशेष कार्यक्रमका साथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा शनिवार प्रवेश गरेका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसको वैदेशिक विभागको केन्द्रीय सदस्य, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य, अन्तर्राष्ट्रिय भलिबल खेलाडी आदि भूमिका निर्वाह गरेर ख्याती कमाइसकेका व्यक्तित्व हुन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भर्खरै फुटेको, नेकपाको फुटपछि नेपाली कांग्रेसको ठूलो हिस्सा उत्साहित बनिरहेको, सत्तामा रहेको नेकपातिर होइन सत्ता वाहिर रहेर आन्दोलनमा होमिएको नेकपामा हंशराज वाग्ले समाहित भएका छन् । युवा नेता हंशराज वाग्लेलाई हामीले पहिलो प्रश्न ग-यौं,
यस्तो अप्ठ्यारो परेको बेलामा नेकपामा के भविस्य देखेर प्रवेश गर्नुभयो त ?
मलाई यतिवेला धेरैले यही प्रश्न गर्छन । हामी सबैलाई थाहा छ, लोकतान्त्रिक परिपाटी यतिवेला निकै संकटमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभामात्र होइन संविधान नै विघटन गरेको अवस्था छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ‘लिक’ मा हिंडाउनका लागि मुख्य पहल लिनुपर्ने यो बेलामा पार्टीका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रतिगमनको मतियार बन्नुभएको छ । रामचन्द्र पौडेलसहित कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर कोइराला अनि थुप्रै नेकाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि पार्टीभित्र लडिरहनुभएको छ तर उहाँहरुले खासै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुभएको छैन । यो बेलामा किनारामा उभिएर प्रतिक्रिया दिनुभन्दा पनि नदीको बीच भेलमा हेलिएर निर्णायक आन्दोलन गरिरहेको शक्तिमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा हामी पुग्यौं ।
लामो समयदेखि सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन र पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएका, खारिनुभएका प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल जस्तो जिम्मेवार नेता, वर्गसंघर्ष र वैचारिक संघर्षमा खारिएका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको ठूलो पंक्ति यो पार्टीमा रहेकाले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा अनि राष्ट्रको समृद्धिका लागि नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएर म पनि यो अभियानमा जोडिएको हुँ ।
तपाईं त नेपाली कांग्रेसमा नै भविस्य भएको युवा नेता हो । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री होमनाथ दाहाललाई समेत यसअघि तपाईले पार्टीको आन्तरिक चुनावमा ओखलढुंगामा पराजीत गरेको भनेर राष्ट्रिय विषय बनेको थियो । राजनीतिका लागि विश्वासिलो आधार त नेकामा थियो, होइन र ?
निश्चय नै । नेकपा फुटेपछि त झन् नेपाली कांग्रेसको सम्भावना बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ । मेरो भनाइ के हो भने पार्टी कुनै चुनावमा सानो र ठूलो हुनसक्छ । त्यो मुख्य होइन । मुख्य भनेको अजेण्डा हो । यतिवेला अग्रगमन र प्रतिगमन, संविधान र लोकतन्त्रको पक्ष कि विपक्षको संघर्षमा कता उभिने भन्ने नै हो । यतिवेला नेपाली कांग्रेसमा गिरिजा कोइराला जस्तो दृढ नेतृत्वको अभाव खड्किएको छ । शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओलीको लोकतन्त्र, संविधानको विरुद्ध, प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनको पक्षमा सहयोगी बनेर काम गरिरहनुभएको छ । यो बेलामा रामचन्द्र पौडेलसहितका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले देउवाको अहिले केपीको गठबन्धनको विरोधमा त बोलिरहनुभएको छ तर देउवाको घेरा नाघेर अगाडि आउन सक्नुभएको छैन । शेरबहादुर देउवाले यसअघि प्रजातन्त्र राजालाई बुझाउनु भएकै हो / गिरिजा कोइराला, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरुको संयुक्त आन्दोलन र प्रयासले मात्र त्यो फिर्ता लिएको अवस्था होइन त ? केपीको अहिलेको प्रयास शेरबहादुर देउवाले लैजान खोजेको प्रतिगमनकै दोस्रो शृंखला हो । केपी ओलीको प्रतिगमनको मतियार बन्ने देउवाको अहिलेको तरिकाले यदि चुनाव गराइहालियो भने पनि नेपाली कांग्रेस ठूलो होइन पाँचौ नम्बरको सानो पार्टी पो बन्ने खतरा देखेको छु । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र नेकाका अध्यक्षले त चुनावमा नगएर ‘मिलिजुली जाने र बाँडीचुँडी खाने’ दाउमा पो लागेको देखेको छु मैले।
मेरो कुरा त फेरि पनि, चुनाव जित्नु, सरकार बनाउने कुरामात्र पनि राजनीतिमा मुख्य होइन । हिजो निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा पनि चुनाव हुन्थे, केही नेताहरुले चुनाव जित्थे, सरकार बनाउँथे, त्यसलाई सही भन्ने र ? जनताको वलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र, संविधानको विरुद्ध केपी अगाडि लाग्ने, सहयोगी बनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेता लुरुलुरु पछि लाग्ने तरिकाले देश नराम्रोसँग फँसेको छ । न्यायालयमा बसेर राम्रो छवि बनाएका चार पूर्व प्रधान न्यायधीश, पूर्व न्यायधीशहरु, बार एशोसियसनका अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्षसहित समाजमा ख्याती प्राप्त वरिस्ठ वकिलहरुले आज के भनिरहनु भएको छ ? नागरिक समाजका अगुवा, स्वतन्त्र सामाजिक संघ संस्थाका अगुवाहरुले आज प्रम केपीको कदमलाई प्रतिगमनकारी भनिरहनुभएको छैन ? प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामात्र होइन संविधान नै विघटन गर्ने दुस्साहस गरेको भनेर विरोध गर्नुभएको छैन ? अनि हामी जस्ता लोकतन्त्र, राष्टको समृद्धिका लागि लामो समय लडेकाहरु कसरी किनारामा बस्ने या केपीको प्रतिगमनको मतियार बनिरहन सकिएला त ?
तपाईसँग अरुहरु पनि प्रवेश गर्नभएको छ कि, एक्लै प्रवेश गर्नुभयो ?
संसद विघटन गरेपछि नेपाली कांग्रेसका जिल्ला जिल्लाका युवा नेताहरु, उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका, अन्तर्राष्टिय, राष्टिय स्तरका खेलाडीहरु माघतिर प्रवेश गर्ने कि भन्ने सोंच बनाउँदै थियौं, राजनीतिक परिस्थिति निकै पेचिलो बन्यो । घटनाक्रम तीब्रतामा बढे, अब यो बेलामा धेरै तयारी गर्नुभन्दा पनि छिटै एउटा निर्णयमा पुगौं भनेर मसहित केही साथीहरुले तत्काल निर्णयमा पुग्यौं । अब हामी आन्दोलनसँगै जिल्ला जिल्लामा पुगेर एकीकरणको अभियानमा जुट्नेछौं । लोकतन्त्र, संविधानको संरक्षण र राष्ट्रको समृद्धिको पक्षमा नेकामा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताको ठूलो हिस्सा प्रचण्ड–माधवले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपामा समाहित हुनुहुनेछ ।
तपाईंलाई पार्टीमा ठोस जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ कि ?
त्यस्तो छैन । यतिवेला राष्टिय अभियानमा जोडिने निर्णय हामीले गरेका हौं । पार्टी नेतृत्वले यतिवेला के भूमिका दिने हो भन्ने सोंचिरहनुभएको होला । यतिखेर पदको बार्गेनिङ गर्नेभन्दा पनि आफ्नो पक्षधरता स्पष्ट गर्ने बेला हो । देश संकटमा परेको छ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको लागि लड्नुपर्ने बेला छ । देश, संविधान र लोकतन्त्र नै खतरामा परेको बेलामा हामीले व्यक्तिगत पाउने भूमिकाको मूल्य के हुन्छ ? यतिबेला आन्दोलनमा तत्काल नजोंडिदा भने धेरै छुटेको महसुस भएर हतारमा निर्णय गरिएको हो ।